Database Replication (part 1) | our notes for our youngers
Filed under: Database Replication — Tags: DataBase, replication, syncronization — sevenlamp @ 4:39 PM
Database Replication (Synchronization)
အိုကေ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို db_A ကနေ db_B ကို replication လုပ်မယ်ဆိုရင်။ db_A က publisher, db_B က subscriber ပါ။ publisher နဲ့ subscriber က ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးထဲမှာ ဖြစ်နိုင်သလို၊ local area network ထဲမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် internet ထဲမှာ ရှိတဲ့ server ၂ လုံးမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ distributor database ကိုလည်း publisher computer ထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ subscriber computer ထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း တခြား ကျွန်ပျူတာ တစ်လုံးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထားလို့ ရပါတယ်။ အခုကျွန်တော်ပြောမယ့် example လေးမှာတော့ publisher ရော၊ subscriber ရော၊ distributor ရော ကို ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးထဲမှာ ထားမှာပါ(ဒီတစ်လုံးပဲရှိတာလေ) 🙂
ကဲ အရင်ဆုံး Replication လုပ်မယ့် database ၂ ခုကို အရင်ဆောက်လိုက်ပါ။ publisher လုပ်မယ့်စက်မှာ db_A နဲ့ subscriber စက်မှာ db_B ကိုဆောက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အဲ့ဒီ database တွေထဲမှာ table လည်းဆောက်ရဦးမယ်နော်။ table ဆောက်တဲ့နေရာမှာ database2ခုလုံးမှာ table အရေအတွက် အတိအကျ တူစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် replicate လုပ်မယ့် table တော့ တူရမယ်။ အခု sample အနေနဲ့ ဒီလိုလေး ဆောက်ပေးလိုက်ပါ။
Remark varchar(250) Checked
– Snapshot publication
– Transactional publication
– Merge publication
Hello Ko Sevenlamp,
Thanks You so much for about this database and i expect to post another new topics especially for database.
Comment by Nway73 — October 21, 2009 @ 6:09 PM
Comment by Mikozan — October 21, 2009 @ 9:51 PM
နေ့တိုင်းစောင့်ဖတ်ပြီး.. သင်ယူနေပါတယ်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အစ်ကိုရေ
Comment by April — October 22, 2009 @ 9:19 AM
အခုလို လာရောက်ဖတ်ရှုပေးကြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီကောမန့်တွေကြောင့်လည်း ကျွန်တော် ဆက်ရေးဖို့ အားတွေ ရှိနေတာ 🙂
Comment by sevenlamp — October 22, 2009 @ 9:28 AM
Thanksalot for your good well.
Comment by Ma Nandar — November 18, 2009 @ 11:56 PM
Sayar, please deliver the presentation about SQL reporting or Crystal Report.Thanksalot for your great good well and kindness.
Comment by Ma Nandar — November 19, 2009 @ 9:33 AM
I don’t know about SQL Reporting. I will post about Crystal Report sooner or later 🙂
Comment by sevenlamp — November 26, 2009 @ 10:13 AM
Comment by phyo — December 7, 2009 @ 11:27 AM
.မသိတာလေးတွေ သိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..
Comment by Anonymous — November 15, 2013 @ 11:20 AM